पूर्वमुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध कदम चालेकी वलीलाई झड्का ! – GALAXY
पूर्वमुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध कदम चालेकी वलीलाई झड्का !
नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित ४ जनाविरुद्ध उजुरी दिएकी सांसद विमला कुमारी खत्री वलीलाई हाइभोल्टेजको झड्का लागेको छ । प्रहरीले उनको किटानी जाहेरी लिन ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनलाई तनाव भएको हो । उनीहरु विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी किटानी जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले आलटाल गरेको माओवादीले आरोप लगाएको हो ।
दाङबाट उप निर्वाचनमा विजेता वली सुरुमा एमाले कि माओवादीको तानातान परेको बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई बन्धक बनाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् । एमालेले उनी आफूहरूको सांसद रहेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्वइच्छाले बसेको पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले दाबी गरेका थिए ।
एमालेले अहिले पनि विमला र नवलपरासी अजय बहादुर शाही एमालेको सूर्य चिन्हबाट टिकट लिएर चुनाव जितेकोले आफूहरू सांसद रहेको जिकिर गर्दै प्रदेश सभा अवरुद्ध पार्ने सम्मका गतिविधि गरेको छ